Anyị makwaara na ụwa ga-emesịa gabiga. Ihe ọjọọ ndị a nile kwa ga-eso ya laa nꞌiyi. Ma onye ọ bụla na-edebe ihe Chineke nyere nꞌiwu ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi.
Chineke enyela anyị ọrụ ọ chọrọ ka anyị rụọ. O kwesịrị ka m rụọ ya ngwangwa. Nꞌihi na ọ bụ nanị nwa oge fọdụrụ tupuu o ruo anyasị. A naghị ejikwa anyasị arụ ọrụ.
Ihe ọzọ mere o ji dị mkpa ibi ezi ndụ bụ nke a. Unu maara na oge ahụ anyị na-ele anya ya na-abịa nso. Ya mere, sitenụ nꞌụra bilie! Ọbịbịa Onyenwe anyị dị nso. Nꞌezie ọ dị nso karịa mgbe ahụ anyị kweere na mbụ.
 “O nweghị onye ọ bụla maara ụbọchị ihe ndị a ga-eme, ma ọ bụ oge ha ga-emezu. Ndị mmụọ ozi amaghị, Nwa nke mmadụ amakwaghị. Ọ bụ nanị Nna m maara. Ebe ọ bụ na unu amaghị mgbe ha ga-emezu, nọọnụ na nche ụbọchị nile. Unu arahụkwala ụra.
 Ndị m hụrụ nꞌanya, unu echefula otu okwu a, nꞌanya Chineke, ọ dịghị ihe dị iche nꞌetiti otu ụbọchị na puku ụbọchị. Ha bụ otu ihe nꞌanya ya. Onyenwe anyị anaghị etufu oge imezu nkwa ya, dị ka ndị mmadụ na-ekwu, kama o sitere ogologo ntachi obi na-eche ndị mmehie ka ha chegharịa, nꞌihi na ọ chọghị ka onye ọ bụla laa nꞌiyi, kama ọ chọrọ ka onye ọ bụla si na mmehie ya chegharịa.
 Kpacharanụ anya otu unu si akpasị ndị na-ekweghị ekwe agwa. Ohere ọ bụla unu nwere jirinụ ya mee ka ndị ọzọ nụrụ ozi ọma a. Ka okwu unu na-ekwu bụrụ nke na-atọ ụtọ na ntị. Mụtakwanụ otu e si enye mmadụ ọsịsa dị mma.
 Ugbu a, ụmụnna anyị, olee mgbe ihe ndị a ga-emezu? Echeghị m na m nwere ihe ọ bụla ikwu banyere oge ha ga-emezu. Nꞌihi na dị ka unu nile maara nke ọma, ọ dịghị onye maara mgbe ha ga-emezu. Onyenwe anyị ga-abịa mgbe a na-eleghị anya ya, dị ka onye na-ezu ohi si abịa mgbe a na-eleghị anya ya. Mgbe ọtụtụ mmadụ ga-asị, “Udo dị, ihe nile na-aga nke ọma,” mgbe ahụ, na mberede, ka oke ịla nꞌiyi dị egwu ga-adakwasị ha, ọ dịkwaghị otu onye ga-agbanarị ihe ọjọọ ahụ. Ihe mgbu ahụ ga-adị ka ihe mgbu na-adakwasị nwanyị ime na-eme.
 Ugbu a geenụ ntị unu bụ ndị na-asị, “Taa ma ọ bụ echi, anyị ga-aga ebe dị otu a, ma ọ bụ obodo dị otu a, ịzụ ahia na ire ahia, anyị ga-anọkwa ebe ahụ otu afọ kpaa ego.” Olee otu unu si mara ihe ga-eme echi? Gịnị ka unu na-eche na ndụ unu bụ? Mmadụ dị ka anwụrụ ọkụ nke a na-ahụ anya nwa oge nta, nke ikuku na-emesịa bufuo. Kama ihe unu ga-ekwu bụ nke a, “Ọ bụrụ na Onyenwe anyị ekwe, anyị gaadị ndụ. Anyị ga-emekwa ihe dị otu a.” Ma ihe unu na-eme bụ ịnya isi banyere ihe unu chọrọ ime. Ụdị ịnya isi a adịghị atọ Chineke ụtọ, nꞌihi na ha dị njọ. Ya mere, mmadụ ọ bụla maara ihe bụ ezi ihe ma jụ ime ya na-emehie megide Chineke.